> Resource> DVD> DV ka DVD burner: Olee otú iji tọghata MiniDV / DV ka DVD
DV bụ a usoro maka Ndekọ dijitalụ video na igwefoto ndekọ, nke bụ ngalaba-mepụtara site na-eduga camcorder emepụta dị ka Panasonic, Sony, JVC, wdg ezie na ụfọdụ camcorders kpọmkwem ndekọ video ka DVD, e nwere ọtụtụ camcorders ụlọ ahịa DV videos Flash ebe nchekwa kaadị na diski ike draịva. Isiokwu a ga-egosi gị otú nyefee video si MiniDV teepu na kọmputa na ọkụ DV ka DVD na Wondershare DVD Creator, ihe dị mfe iji DVD eke na-ere ọkụ software-enyere gị aka na-ekiri DV video on TV ala.
Na-esonụ, Aga m egosi gị otú ọkụ MiniDV teepu ka DVD na Windows version ihe atụ. Ọ bụrụ na ị nwere Mac kọmputa, ibudata Mac version nke DV ka DVD Ntụgharị: DVD Creator for Mac. Nzọụkwụ ndị yiri.
Nzọụkwụ 1: Nyefee MiniDV video na kọmputa
Iji ọkụ gị DV ka DVD diski, nzọụkwụ mbụ bụ nyefee video na teepu n'ime kọmputa. Fọrọ nke nta niile DV camcorders nye IEEE 1394 (FireWire, i.LINK) ọdụ ụgbọ mmiri nyefee video na kọmputa. Jikọọ gị camcorder gị na kọmputa, gbanye ya (mgba ọkụ Play (VCR) ọzọ ma ọ bụrụ dị) na n'ikpeazụ weghara video na kọmputa na software dị ka Windows Movie Onye kere ma ọ bụ iMovie.
Nzọụkwụ 2. Wụnye na ẹkedori MiniDV / DV ka DVD Ntụgharị
Mgbe ibudatara Wondershare DVD Creator, awụnyere na ẹkedori ya. Wee pịa "Import" ka ịgbakwunye videos gị mkpa n'ime DV ka DVD Ntụgharị.
Nzọụkwụ 3. Ibu Ibu video faịlụ na dezie ha
Na-emekarị video edezi dị mkpa, i nwere ike iji software hazie gị vidiyo site trimming, cropping, n'ịgbanwe videos, na-agbakwunye watermarks, edezi DVD menu na na. Ka ịnweta edit window, dị nnọọ pịa pensụl na akara ngosi e wezụga onye ọ bụla video clip.
Nzọụkwụ 4. Preview na ọkụ MiniDV / DV ka DVD
Egbu, pịa ka ịhụchalụ n'ihi nke edezi bụrụ na i nwere ike mma ya na a ụfọdụ ụzọ. N'ikpeazụ, ị pụrụ nnọọ pịa "Ọkụ" button na-amalite na-ere ọkụ.
Atụmatụ: The eji ohere nke diski ga-egosipụta na ala; Ị nwere ike ịhọrọ hà na-ere ọkụ DVD n'etiti "DVD-R4.5G" na "DVD-R9.0G".
Na ọrụ DV ka DVD Creator, ị ga-ahụ ya mara mma mfe ọkụ MiniDV / DV video ka DVD nke mere na ị pụrụ ịnụ ụtọ gbaa videos gị na ezinụlọ gị n'ụlọ.
Ihe banyere DV na MiniDV
Dị ka ị na-ahụ, isiokwu a na-ekwu banyere ọkụ DVD si DV faịlụ ma ọ bụ MiniDV teepu, otú ahụ ka m ga-amasị ịkọrọ ihe ọmụma banyere DV na Obere DV ebe a:
DV: Na a DV faịlụ, video, ọdịyo na metadata na-echekwara na Digital Interface Format (DIF) blocks nke bụ isi nkeji nke DV iyi. DIF blocks nwekwara ike-azọpụta na kọmputa faịlụ na raw DIF format (* .dv, ma ọ bụ .dif) ma ọ bụ koodu na-ewu ewu faịlụ formats dị ka Audio Video Interleave (.avi), QuickTime (.mov) na Ihe Exchange Format (.mxf ). Magnetik teepu bụ media ji camcorders idekọ videos, gụnyere MiniDV, DVCAM-L, DVCPRO-M, Digital8, wdg
MiniDV: Ọ na-ezo aka teepu ma ọ bụ ka usoro mgbasa ozi dee gị vidiyo site camcorders. Mgbe DV bụ ụkpụrụ format kwetara na site niile camcorder emepụta na-eji MiniDV teepu dị ka Ndekọ media. Ya mere, mgbe anyị na-ekwu MiniDV ka DVD ma ọ bụ DV ka DVD, ọ bụ otu ihe: ị ọkụ camcorder vidiyo na DVD maka ichebe ma ọ bụ egwu na TV.
Otú nyefee Super8 ka DVD